Fampidiram-bola :: Orinasa telo amby sivifolo nisitraka sahady ny tosika “Miarina” • AoRaha
Nanomboka, tamin’ity herinandro ity, ny fampindramambola “Miarina”, na ny fanomezana tosika ara-bola ho an’ireo orinasa madinika sy salantsalany ary mifanindran-dalana amin’ny fandaharanasa Fihariana. Dimy alina tapitrisa ariary no vola hatokan’ny fanjakana, izay hiarahany miasa amin’ireo banky BOA sy BNI manerana ny Nosy, hampindramina amin’ ireo orinasa tsy miankina misedra olana ao anatin’izao krizy ara-pahasalamana noho ny valanaretina eto amin’ny firenena izao.
Fampindramam-bola telo amby sivifolo sahady no efa nahazo fankatoavana, raha ny angom-baovao azo avy amin’ ireo tompon’andraikitra avy amin’iretsy banky iretsy.
Vola efatra arivo tapitrisa ariary mahery no efa navoaka, ankehitriny, ka ireo mpivarotra entana samihafa, toy ny sakafo, kojakoja fampiasa amin’ny fiainana andavanandro, zavapisotro… no mandrafitra ny 41%-n’ireo mpindram-bola. Ireo mpandraharaha miasa amin’ny sehatry ny asa tanana sy ny raharaha isan-karazany, toy ny fanaingoana, ny fandefasana na fanaterana entana, ny fikarakarana lanonana sy ny sisa kosa ny ambiny.
Nolazain’ny avy eo anivon’ ny banky fa “fepetra takina amin’ireo mpindram-bola ny tsy fampiasana olona mihoatra ny telopolo; ny fananana vola mihodina latsaky ny dimy arivo tapitrisa ariary ary ny taratasy fanamarinana fa efa nihodina telo taona fara fahakeliny ny orinasany. Telonjato tapitrisa ariary kosa no vola ambony indrindra azo indramina”.
Maro ireo mpitantana orinasa madinika sy salantsalany milaza ho afa-pahasahiranana noho ity fampindramam-bola” Miarina” ity na eo aza ny tahan’ny zana-bola somary ambony. “8% ny tahan’ny zanabola ho an’ireo misehatra eo amin’ny tontolon’ny indostria sy ny raharaha isan-karazany ka manomboka amin’ny faha enimbolana no handoavana azy. 9% kosa ny tahan’ny zanabola takiana amin’ireo miasa amin’ny fizahantany. Eo amin’ ny fahavalon’ny volana hamerenam-bola no manomboka ny fandoavana ny zanany”, hoy hatrany ny banky. Mikasika ny fe-potoana indray dia manomboka amin’ny roa volana ka hatramin’ny roa taona ny famerenana ny renivola nindramina sy ny zana-bola.
Tsiahivina fa efa tamin’ny 17 jona no napetraka ny fampindramam-bola Miarina. Taorian’ny fihaonan’ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry, tamin’ireo vondron’ny mpandraharaha madinika sy salantsalany teny Iavoloha, tamin’ity herinandro ity, kosa vao nanomboka nanan-kery izany.